एक चेलीकाे यस्तो बिजोग – रुँदै भन्छिन् वकिललाई दिने पैसा छैन! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > एक चेलीकाे यस्तो बिजोग – रुँदै भन्छिन् वकिललाई दिने पैसा छैन! (भिडियो सहित)
एक चेलीकाे यस्तो बिजोग – रुँदै भन्छिन् वकिललाई दिने पैसा छैन! (भिडियो सहित)
admin October 5, 2018 भिडियो, समाज 0
दुख: सुख प्रकितीको नियमनै हो तर पनि यो संसारमा दुख; कसलाई पर्दैन र आज हामी संग यस्ती चेली हुनुन्छ जो सुमुधुर स्वरकी धनी गायिका पनि हुन् शुभद्रा पौडेल जो जन्म देखि नै दुखको पोखरिमा डुबेकी छन । स्कटनेपाल प्रस्तोता नीलमणि भण्डारीको अन्तरबार्तामा उनको जीवन कथा सुन्दा तपाई लाइ आज यस्तो लाग्ने छ के उनलाई भाग्यले पक्कै पनि ठगेकै हो त। शुभद्रा जन्म जातै अपाङ्ग भएर जन्मिएकी पक्कै पनी होईनन् ।
तर जन्मिएको आठ महिनामा अगेनामा परेर उनको दूबै खुट्टाहरु गुम्न पुगे। उनी अहिले कृतिम खुट्टाको सहायता लिदै हिँडडुल गर्न अली अली सक्छिन्। उनका श्रीमान सपाङ्ग हुन्, उनिहरु मायाप्रेमको डोरीमा गासीएर बिबाह को बन्धनमा बाधिएका हुन् । तर बिडम्बना आज उनि श्रीमान बिना एक्लै संघर्षको जिन्दगी काटी रहेकी छन् उनको कहाली लाग्दो जीवन कथा सुन्दा बितिकै सायदै भाबुक न हुने यो दुनियामा विरलै होलान।
किन उनका श्रीमानले उनलाई एक्लै छोडे बाकी उनको जीवन कहानी तल भिडियो हेरी थाह पाउन सक्नु हुनेछ सक्दो शेयर गरि सम्बन्धित निकाय सम्म पुराई दिनु हुन् पनि हामि अनुरोध गर्दछौ ।
स्कटनेपाल युकेबाट साभारित साभाग्री ।
बिदेशबाट फर्किएका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा देखियो यस्तो दृश्यः ‘राजतन्त्रको झल्को’
OMG! भर्खरै दाङकाे लमहीबाट अायो यस्तो दुःखद खबर
अत्यन्तै दुर्लभ घटना: एक महिलाले एकै पटक जन्माइन ४ शिशु! – भिडियो सहित हेर्नुहाेस्
भिजिट भिसामा युएई गएका यी नेपालीहरूकाे भयो यस्तो हालत, यस्तो अलपत्र पार्ने उल्टै यस्तो धम्की दिदै… (भिडियो हेर्नुस)